၁၈ အသက်အနှစ် - ဗီဒီယိုချက်တင်-အကောင်းဆုံး!
အလက်ဇန်းဒါး Yurlov အုပ်စု:
လူတနှင့်အများအပြားအခြားသူများတယောက်ရှိ၏ဆႏၵလက္မွတ္မ်ား။ ငါရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖောက်သည်များ၊နှင့်အတူနောက်ဆုံးအပြောင်းအလဲအတွက်ကဒ်ကိုလက်ခံရရှိ။ င်လာဖို့ခက်ခဲမြေပုံရယူပါ၊ဒါပေမယ့်နေဆဲဖြစ်နိုင်။ အရှိန်နယ်စပ်ကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့်အစင်္ကြံ၏အထူးအလိုင်းကိုလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်လိုင်းဖြင့်လည်းကောင်းအမှုထမ်းဝန်ထမ်းများအတွက်သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်။ စကၤာ၊ကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးပါသည္အောက်အစီအစဉ်များအတွက်မကြာခဏခရီးသွားနှင့်အတူပ်အပေါ်သို့တင်ဆက်မှုအနေနဲ့ပက်ကဒ်နှင့်ရုံးအတွက်။ ငါခရီးသွားလာရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါအဇာ? အဲဒီနှစ်နိုင်ငံအဇာ။ သာပေါင်း-နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုထူး။ "ငါဒီကဒ်အတွက်နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၇ နှင့်ရှိပြီးသားမှစီမံခန့်ခွဲရဘဲဗီဇာအတွက်ဂျပန်၊စင်ကာပူ၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်း၊တရုတ်နှင့်ဟောင်ကောင်။ မကြာမီသူတို့ပျံတက်ဖို့နယူးဇီလန်နှင့်ဩစတြေးလျအဇာ။
သာမန်ယောက်ျားတစ်ယောက်၊တူထောင်ပေါင်းများစွာ။ အမြင့် ၁၇၅ စင်တီမီတာ၊အလေးချိန် ၆၅ ကီလို၊အားကစားရွာ၊အဝတ်အစားစတိုင်-ပုံမှန်ရိုးရှင်းတဲ့အဘို့အရှာနေတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမျိုးသမီးအတူတကွနေထိုင်ရန်ငါပွင့်လင်းဖြစ်ကြောင်းကို၊ရွှင်လန်းသော၊လူငယ်အမျိုးသမီး။ အလေ့အကျင့်ယောဂ။ မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းများ။ ငါကချစ်။ ငါ့အမြင့် ၁၆၂၊အလေးချိန် ၅၅ ကီလိုဂရမ်။ ဆံထုံးမှတစ်စတုရန်း။ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏အသက်တာ။ အပြုသဘော။ ငါ့အဝတ်စတိုင်သည်ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား ၁၇၀ အကဲတစ်ခါတစ်ရံဖိနပ်မပါဘဲ။ ပိဳင္ကားတခါတလေ၊သို့မဟုတ်ပျမ်းမျှ။ ကြည့်ရှုများအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊အထွေထွေနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အသက်တာအတွက်၊တစ်ဦးအေးဆေးတည်ငြိမ်အစည်းအဝေး၏အသက်အရွယ်၊အဆီနှင့်မိုးသည်းထန်စွာအလေးချိန်၊စိတ်မပူပါနဲ့။
लामो-अवधि मा अनुभव यात्रा मेक्सिको (क्यानकुन)
အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း သိမှရမြို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ယိုချိန်းတွေ့ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက် ဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များချိန်းတွေ့ ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချက်တင်အခြားရွေးချယ်စရာ ၁၈ အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဓါတ္ပံုဗီဒီယို